I-Consumer Electronics - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Amabhodi wezoMbane wabathengi
I-Fumax inikeza ibhodi ye-electronics yomthengi ethembekile futhi ehlala njalo.
Amakhompyutha wabathengi yimikhiqizo yomsindo nevidiyo ehlobene nomsakazo nethelevishini esetshenziswa ngabantu nemindeni.
Izici zamabhodi we-electronics wabathengi
Kufakwa ini amabhodi we-electronics wabathengi?
Amasethi we-TV, ama-video player (i-VCD, i-SVCD, i-DVD), ama-video recorder, ama-camcorder, imisakazo, amarekhodi, izipikha ze-combo, ama-player player, ama-CD player, izingcingo, ama-computer, izinto zasendlini, imishini yezempilo yasekhaya, i-elektroniki yezimoto, njll.
Ukubaluleka kokuthuthukisa amabhodi we-elektroniki yabathengi
Kubathengi, ukusetshenziswa kwemikhiqizo yabathengi ye-elekthronikhi kusizile ukwenza ngcono ukuthokomala nokunethezeka kwempilo, kwandise ubumnandi futhi kuthuthukise nezinga lempilo, ngakho-ke sekuyinto ebalulekile ezimpilweni zabantu banamuhla.
Umthamo wamabhodi we-elektroniki yabathengi:
Ubukhulu Bethusi: 0.1mm, 0.2mm
Ubukhulu beBhodi: 0.21mm-7.0mm
Ubuncane. Hole Usayizi: 0.1mm
Ubuncane. Ulayini Ububanzi: 0.1mm
Ubuncane. Isikhala Somugqa: 0.1mm
Ukuqedelwa Kwaphezulu: Ukucwiliswa Ou
umbala: obomvu / oluhlaza okwesibhakabhaka / oluhlaza / omnyama
Uhlobo: Electronic PCB Assembly
Izinto: FR4 CEM1 CEM3 Hight TG
I-PCB ejwayelekile: IPC-A-610 E
Insiza: One Stop Turnkey Faka iFirmware
Umbala wesifiva sesolder: Okumhlophe Okumhlophe Okuphuzi Okubomvu Okuhlaza
Into: Ikhibhodi ye-PCB Assembly
Isendlalelo: izingqimba 1-24
Umkhuba wokuthuthukiswa kwamabhodi we-electronics wabathengi:
Uma kubhekwa ukuthambekela kokuthuthuka kwemikhiqizo yabathengi kulo nyaka, into ebaluleke kakhulu ukuthi imikhiqizo iya ngokuya iba nokuhlakanipha. Igagasi lezobunhloli selibe yisivumelwano somkhakha kanye nesiqondiso soguquko.